လင်္ကာ: မဒမ်သံခဲ ကကိုယ်တိုင် ခေါင်းဖြတ်ချင်ခဲ့တာ ။
by Htay Tint on Thursday, March 15, 2012 at 11:45pm ·
ကိုငါက သဘောထားထုတ်ပေးဖို.ဘာမှမလိုပါဘူး လို.ပြောပါတယ်။
....နောက်တခါ မဒမ်သံခဲ ကလဲမန္တလေးမှာအလင်းဝင်ပြီးရောက်လာချိန် မှာ“ဒီမှာကိုညီညီ ဒီသတ်ဖြတ် မှုတွေမှာ CS သံချောင်းမှားခဲ့တယ် ဆို ရင်တောင်စေတနာအမှားပဲဖြစ်ရမယ်ဆိုပြီး အဲဒီတုန်း ကမန္တလေး တရုပ်တန်းဈေးကကျနော့်မိန်းမဆိုင်ရှေ့ မှာ အော်ပြောတော့ကျနော်တောင် ဆဲလွှတ် လိုက်သေးတယ်။
အဲဒီ မဒမ်သံခဲကပဲ ကိုထွန်းအောင်ကျော်ကို ကျမ ကိုယ်တိုင်ခေါင်းဖြတ် ပါရစေ လို့ သံချောင်း အိမ်ကို တက်ပြီးတောင်းဆိုတယ်ဆိုတာ အားလုံးပြောနေတဲ့ကိစ္စပါ...
ပတ်သက်ပြီး အစီုးရကကြီးမှူးပြီးသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ ၂ ခါလုပ်ခဲ့ပြီးပါပြီ။တခါဆမားညီညီနာမည်နဲ. လွန်ခဲ့တဲ့ ၄ နှစ်လောက်ကတည်းကအင်တာနက်ကနေတဆင့်သတင်းဌါနတွေ၊နောက်ကာယကံမြောက် ကျုးလွန်ခဲ့ သူတွေ၊နောက်သူတို.နဲ.ပတ်သက်ခဲ့သူတွေကိုပေးပို.ခဲ့ပါတယ်။
ကိုသံချောင်းတော့ဘာမှ ခုခံချေပခွင့်မရပဲ အနှိပ်စက်ခံရတော့မှာပဲဆိုတဲ့ဂရုဏာတရား ထားနိုင် တဲ့သူက ကိုထွန်းအောင်ကျော် တို.၊ကိုချိုကြီးတို.ဘာမှခုခံ ချေပခွင့်မရပဲအသက်ခံခဲ့ရတယ် ဆိုတဲ့ ဂရုဏာမျိုး မထား နိုင်ရတာလဲ လို.မေးချင် ပါတယ်။
။နောက်တခါ မဒမ်သံခဲ ကလဲမန္တလေးမှာအလင်းဝင်ပြီးရောက်လာချိန်မှာ“ဒီမှာကိုညီညီ ဒီသတ်ဖြတ် မှုတွေမှာ CS သံချောင်းမှားခဲ့တယ် ဆိုရင်တောင်စေတနာအမှားပဲဖြစ်ရမယ်ဆိုပြီး အဲဒီတုန်း ကမန္တလေး တရုပ်တန်းဈေးကကျနော်.မိန်းမဆိုင်ရှေ.မှာ အော်ပြောတော့ကျနော်တောင်ဆဲလွှတ် လိုက်သေးတယ်။
အဲဒီ မဒမ်သံခဲကပဲ ကိုထွန်းအောင်ကျော်ကို ကျမ ကိုယ်တိုင်ခေါင်းဖြတ်ပါရစေ လို.သံချောင်း အီမ်ကို တက်ပြီးတောင်းဆိုတယ်ဆိုတာအားလုံးပြောနေတဲ့ကိစ္စပါ။
(အဲဒီထွန်းအောင်ကျော်ရဲ.အစ်ကို ကိုချိုကြီးအီမ်မှာ မဒမ်သံခဲကိုမန္တလေးထောက် လှမ်းရေး ၁ က လိုက် ဖမ်းနေချိန်မဒမ်သံခဲနဲနောက်တယောက် ၁၀ ရက်လောက်တိတ်တိတ်လေးအိပ်စားသွားပြီးကိုချိုကြီး
ကပဲတာဝန်ယူပြီးလွတ်မြောက်နယ်မြေကိုပို.ပေးခဲ့တာကိုမဒမ်သံခဲမေ့နေပုံရပါတယ်)။နောက်တခုကအဲဒီလို ကိုယ်တိုင်ခုတ်ချင်ပါတယ်လို.ပြောလားလိုကျော်စွာဝင်းမောင်က ကျော်ခိုင်ဝင်းကိုမန္တလေးပွဲ
မှာမေးတော့အဲဒီတုန်းကတပ်ကအမျိုးသမီးထဲကဒေါ်လိုင်ယောက်ပဲရှိတာမေးမမေးတော့မသိဘူးလို.ဝေ့ လည်ကြောင်ပတ် ဖြေသွားပါတယ်။
သံခဲကိုပြန်မေးချင်တာက ABSDF ထဲကရာဇဝတ်မှုကျုးလွန်ခဲ့သူတွေ ကို အရေးယူဖို.လုပ်မှာလား?
htay tint facebook မှကူးယူဖော်ပြသည်။